“မနကျစောစောမှာ ရှတျ ဆိုရမယျ့ ငှဒေလ ဟောဝငျစတေဲ့ လာဘျနှိုး ဂါထာတျောကွီး” – Youth Bar
“မနကျစောစောမှာ ရှတျ ဆိုရမယျ့ ငှဒေလ ဟောဝငျစတေဲ့ လာဘျနှိုး ဂါထာတျောကွီး”
ပရိသတျကွီး တို့အတှကျကောငျးသတငျးလေးတဈခုပွောပွခငျြပါတယျ မိမိမှာရှိနတေဲ့ လာဘျေ တှ မနိုးဘဲ မပှငျ့ဘဲရှိနရေငျ လာဘျနှိုးဂါထာတျောကွီးကို ရှတျဖတျပူဇျောပေးတာနဲ့ လာဘျနိုး လာဘျပှငျ့ပွီး ငှတှေတေလဟော ဝငျရောကျစမှောဖွဈပါတယျ လာဘျနှိုးဂါထာတျောကွီးကို အောကျမှာ ဖျောပွပေး လိုကျပါတယျ…
တိုငျးနီးပါး လာဘျပှငျ့ လာဘျရှငျဂါထာတို့ ငှဝေငျဂါထာ တို့ပဲ ရှတျဆိုနကွေပွီး လာဘျကိုနှိုးေ ပးဖို့ မနေ့တေတျကွပါ တယျအဲ့တော့ လာဘျလာဘ ငှကွေေးတှကေ ဝငျသငျ့သလောကျမ ဝငျတော့ဘူးပေါ့ အဲ့တာကွောငျ့ ဒီလာဘျနှိုးဂါထာလေးကို တငျပွပေးလိုကျပါတယျ။
ရှတျဆို ပုံကေ တာ့မနကျ အိပျယာထ မကျြနှာသဈပွီးတာနဲ့ ပိုကျဆံအိတျ ကိုကိုငျ မွတျစှာဘုရားရှငျ ကိုယျတျောမွတျကွီးကို အာရုံပွုပွီး
၁။ နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓဿ ကို ၃ခေါကျ ရှတျဆိုပါ။ ၂။ သရဏဂုံ ၃ပါးကို တဈခေါကျရှတျ ဆိုပါ။ ၃။ ပွီးရငျတော့ အခုပွောတဲ့ လာဘျနှိုး ဂါထာကို ၂၇ ခေါကျရှတျဆို ရပါမယျ။
လာဘျနှိုးဂါထာတျောသိဒ်ဓိတဇော သိဒ်ဓိဝရာသိဒ်ဓိဇယြော သိဒ်ဓိကမ်မါသတ်ထု ပူဇာ လာဘဝရာ ..သဗ်ဗပေိယာ ဘဝတုမေ။… ဒါဆို ကိုယျ့အတှကျ ကိုယျပိုငျဆိုငျရမယျ့ ကိုယျပိုငျဆိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ လာဘျ ကိုနှိုးပွီးပါပွီ….
လာဘျပှငျ့ဂါထာတို့ လာဘျချေါဂါထာတို့ ငှရေဂါထာတို့ နှဈသကျရာ ထပျပွီး ရှတျတော့ပေါ့။ေ န့စဉျမပကျြအကှကျ ဆောငျရှကျပါ ၇ ရကျအတှငျး ထူးခွားသိသာလာပါလိမျ့မယျ သတိပွုရမှာက လာဘျနှိုးပွီးမှ လာဘျချေါပါ
ဒါကွောငျ့ ပရိသတျကွီးတို့လညျး လာဘျတှနေိုးလာအောငျ လာ ဘျနှိုး ဂါထာတျောကွီး ကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ လာဘျနှိုး ဂါထာတျောကွီး ရှတျပွီးရငျ လာဘျေ ချါ လာဘျပှငျ့ လာဘျရှငျဂါထာတခုခုတော့ ရှတျဖို့ မမနေဲ့နျော…
အားလုံး သိအောငျလညျး ပွနျ Share ပေးပါနျော
“မနက်စောစော တစ်ကြောင်းတည်းသာ ရွတ် ဆိုရပြီး ငွေဒလ ဟောဝင်စေတဲ့ လာဘ်နှိုး ဂါထာတော်ကြီး”
ပရိသတ်ကြီး တို့အတွက်ကောင်းသတင်းလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ် မိမိမှာရှိနေတဲ့ လာဘ်ေ တွ မနိုးဘဲ မပွင့်ဘဲရှိနေရင် လာဘ်နှိုးဂါထာတော်ကြီးကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးတာနဲ့ လာဘ်နိုး လာဘ်ပွင့်ပြီး ငွေတွေတလဟော ဝင်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ် လာဘ်နှိုးဂါထာတော်ကြီးကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်…
တိုင်းနီးပါး လာဘ်ပွင့် လာဘ်ရွှင်ဂါထာတို့ ငွေဝင်ဂါထာ တို့ပဲ ရွတ်ဆိုနေကြပြီး လာဘ်ကိုနှိုးေ ပးဖို့ မေ့နေတတ်ကြပါ တယ်အဲ့တော့ လာဘ်လာဘ ငွေကြေးတွေက ဝင်သင့်သလောက်မ ဝင်တော့ဘူးပေါ့ အဲ့တာကြောင့် ဒီလာဘ်နှိုးဂါထာလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ရွတ်ဆို ပုံကေ တာ့မနက် အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် ကိုကိုင် မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို အာရုံပြုပြီး
၁။ နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ ကို ၃ခေါက် ရွတ်ဆိုပါ။ ၂။ သရဏဂုံ ၃ပါးကို တစ်ခေါက်ရွတ် ဆိုပါ။ ၃။ ပြီးရင်တော့ အခုပြောတဲ့ လာဘ်နှိုး ဂါထာကို ၂၇ ခေါက်ရွတ်ဆို ရပါမယ်။
လာဘ်နှိုးဂါထာတော်သိဒ္ဓိတေဇာ သိဒ္ဓိဝရာသိဒ္ဓိဇေယျာ သိဒ္ဓိကမ္မါသတ္ထု ပူဇာ လာဘဝရာ ..သဗ္ဗေပိယာ ဘဝတုမေ။… ဒါဆို ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ့် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ လာဘ် ကိုနှိုးပြီးပါပြီ….
လာဘ်ပွင့်ဂါထာတို့ လာဘ်ခေါ်ဂါထာတို့ ငွေရဂါထာတို့ နှစ်သက်ရာ ထပ်ပြီး ရွတ်တော့ပေါ့။ေ န့စဉ်မပျက်အကွက် ဆောင်ရွက်ပါ ၇ ရက်အတွင်း ထူးခြားသိသာလာပါလိမ့်မယ် သတိပြုရမှာက လာဘ်နှိုးပြီးမှ လာဘ်ခေါ်ပါ
ဒါကြောင့် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း လာဘ်တွေနိုးလာအောင် လာ ဘ်နှိုး ဂါထာတော်ကြီး ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် လာဘ်နှိုး ဂါထာတော်ကြီး ရွတ်ပြီးရင် လာဘ်ေ ခါ် လာဘ်ပွင့် လာဘ်ရွှင်ဂါထာတခုခုတော့ ရွတ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်…
အားလုံး သိအောင်လည်း ပြန် Share ပေးပါနော်
အိမျတဈအိမျမှာ လာဘျမပိတျအောငျ ဒါတှကေိုရှောငျပါ